China VSD Vetikal Sump mgbapụta (Repalce SP) ndị na-emepụta na ndị na - eweta ya | damei kingmech mgbapụta
AKWneticKWỌ M Magnet
MZF Magnetic Drive mgbapụta
API610 VS4 mgbapụta LYD Model
API610 OH2 mgbapụta CMD Model
VSD Vetikal Sump mgbapụta (Repalce SP)
TCD Cyclo Vortex mgbapụta (Repalce TC)
HFD kwụ Froth mgbapụta (Repalce AHF)
B HeaR Hea Nrụgide Dị Mkpa Ọrụ slurry mgbapụta (Repalce AH)
Ike ： 17-1267m3 / h
Ihe: Cr27, Cr28, ihe mkpuchi roba
Pịnye VSD nfuli bụ vetikal, centrifugal slurry nfuli submerged na sump na-arụ ọrụ. Ezubere ha maka ịnapụta abrasive, nnukwu urughuru na slurries buru ibu. Nfuli ndị a enweghị mkpa maka akara aka ya na mmiri akara. Enwekwara ike ịrụ ọrụ ha maka ezughị oke ọrụ. VSD ebe a pụtara Vumpical Sump Duty Slurry Pump.
nke ruru eru maka ọnọdụ ọrụ nke ọkwa dị omimi. A na-agbakwunye ụlọ ọrụ na-ebu ndu na mgbapụta na mgbapụta nke mgbapụta ọkọlọtọ, ya mere mgbapụta ahụ nwere ma ọ na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide ma na-agbasawanye ngwa ngwa, mana mmiri na-ehichapụ kwesịrị itinye na ntugharị ntuziaka.
Wet akụkụ nke ụdị VSD mgbapụta ka nke abrasion na-eguzogide ígwè
Akụkụ niile nke ụdị VSD mgbapụta mikpuru n'ime mmiri mmiri na-agbanye roba liner. Ha ruru eru ibugharị slurry abrasive slichry ọ bụla
Iburu Mgbakọ 一 Biarin, aro na ụlọ na-n'ụba kwesịrị ekwesị iji zere nsogbu ndị metụtara ọrụ nke cantilevered nkọ ke akpa oké egwu ọsọ zones.
Nzukọ ahụ bụ mmanu mmanu ma mechie ya site na labyrinth; elu bụ griiz kpochara na ala na-echebe site na a pụrụ iche flinger. The elu ma ọ bụ mbanye ọgwụgwụ amị bụ a yiri ala ụdị ebe ala agba bụ a abụọ taper ala na preset ọgwụgwụ ise n'elu. Nke a dị elu arụmọrụ amị ndokwa na siri ike aro ewepu
mkpa nke a miri submerged amị.
Mgbakọ Kọlụm 一 Emepụtara kpamkpam site na nchara nchara. Vdị VSDR bụ elastomer kpuchie
Casing 一 Nwere a bolt-na mgbakwunye na isi nke kọlụm. Ọ na-arụpụtara site na a na-eguzogide ọgwụ alloy maka SP na si kpụrụ elastomer maka VSDR.
Ndị na-eme ka ndị na-agba mmiri na-agba ume (ntinye elu na nke ala) na-ebute ibu ọrụ na-ebu ala ma nwee nnukwu mmiri dị omimi maka nkwụsị nke kachasị ike na maka ijikwa nnukwu ihe siri ike. Yiri alloys na-eguzogide ọgwụ, polyurethane na ndị elastomer kpụrụ akpụ ga-agbanwe. A na-etinye impeller na axially n'ime nkedo n'oge nzukọ site na mpụga shims n'okpuru ebu ụlọ ụkwụ. Ọ dịghị mgbanwe ọzọ dị mkpa.
Oke ihe nkedo 一 Drop-in metal mesh; snap-on elastomer ma ọ bụ polyurethane maka nfuli VSD na VSDR. Strainers dabara na oghere kọlụm.
Lower Strainer 一 Bolted metal ma ọ bụ polyurethane maka SP; snap snap-na elastomer maka VSDR.
Igbapụta Pipe al Metal maka VSD; elastomer kpuchiri maka VSDR. All wetted metal akụkụ na-kpamkpam nchara na-echebe.
Amụma Amụma 一 Ọ dịghị
Mgbaghara 一 Mpụga agitator ịgba njikọ ndokwa nwere ike dabara na mgbapụta dị ka nhọrọ. N'aka nke ọzọ, a na-etinye agitator igwe maka ogologo osisi na-agbapụta site na anya anya.
Akụrụngwa 一 Nfuli nwere ike ịmepụta na ihe abrasive na corrosive na-eguzogide ọgwụ
Metallurgical, Mining, Kol, Ike
Nke gara aga: VFD Vetikal Froth mgbapụta (Repalce AF)
Osote: WAD na-adịghị ike abrasive ọrụ slurry mgbapụta (Repalce L / M)
API610 OH5 (CCD) mgbapụta
CFD Cyclone feeder Ọrụ mgbapụta (Dochie-MC & MCR)
API610 OH3 mgbapụta GDS Model
API610 BB4 (RMD) mgbapụta